Global Voices teny Malagasy » Pakistàna: Avereno Indray Ny Fanentanana Teknolojika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Mey 2017 5:05 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Saleem Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Vehivavy sy Miralenta
Ny Take Back The Tech,  (TBTT) na Avereno Indray Ny Fanentanana Teknolojia dia fanentanana iray ifandrimbonana izay misy mandritra ny 16 Andron'ny Fikatrohana Manohitra ny Herisetra Mifandray amin'ny Maha-Lahy na Vavy  (25 Nov – 10 Dec). Ny tanjony dia ny hampiroborobo ny TIC ho hampitsaharana ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Ao Pakistàna, ny P@SH@- Pakistan Software Houses Association - dia mandray ilay hetsika sy mitondra azy mandroso ary efa nanomboka sahady fanentanana any anaty sehatra samihafa anaty aterineto any.
Jehan Ara, Filohan'ny P@sh@, no nanomboka ilay fanentanana taorian'ny nitarihany fihaonana kely niarahana tamin'ireo bilaogera mba hanampy amin'ny fikarohana làlana mba hiteraka vokatsoa ilay fanentanana. Ao amin'ny bilaoginy In the Line Of Wire , zarain'i Jehan ny antsipirihany amin'ilay fanentanana sy ireo fomba azon'ny olona hitondrana ny anjara birikiny.
jehan_ara : Ndeha horesahantsika hoe lalàna inona no misy hiadiana amin'ny Herisetra manjo ny Vehivavy, amin'ny fampiasantsika ny TIC ary raha toa ilaina ny manova/manitsy azy ireny #takebackthetech 
rai_azlan  Efa fantatra loatra fa ny herisetra dia mazàna mifàrana rehefa misy hafa miditra an-tsehatra. #takebackthetech 
faisalkapadia:  HO AN'IREO VEHIVAVY AO PAKISTANA Ndeha hofaranantsika ny herisetra an-tokantrano manjo azy ireo #TBTT 
Rai Azlan ao amin'ny bilaogy “My land Pakistan”  dia niresaka ny filàna manasongadina ireo tranganà herisetra manjo ny vehivavy.
Teabreak , ilay toerana lehibe indrindra famondronana bilaogy ao Pakistàna, dia nanambàra  ny fanohanany ilay fanentanana, niantso ireo bilaoger rehetra hanatevina laharana sy hanely ny feo. Toerana iray mampiantrano bilaogy maherin'ny 1.200 voasoratra anarana ao Pakistàna ny Teabreak. Ny fanokanantena ho an'ilay hetsika dia hanampy hanely azy ho any aminà olona bebe kokoa. Betsaka ireo fanohanana tonga rehefa injay ny “The Laid Back Show “, nampiantranoin'ireo bilaogera malaza Awab Alvi  sy Faisal Kapadia , nanokana andiany iray manontolo ho an'ilay fanentanana mba ho fanampiana amin'ny fanapariahana ny fanairana ary hanangonana tohana misimisy kokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/30/101118/
 Ny Take Back The Tech,: http://www.takebackthetech.net/
 16 Andron'ny Fikatrohana Manohitra ny Herisetra Mifandray amin'ny Maha-Lahy na Vavy: http://www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html
 P@SH@- Pakistan Software Houses Association: http://www.pasha.org.pk/
 In the Line Of Wire: http://jehanara.wordpress.com/2009/11/25/take-back-the-tech-join-the16-days-of-activism/
 lahatsoratra : http://farihaakhtar.blogsome.com/2009/11/25/lets-tbtt/
 “My land Pakistan”: http://mylandpakistan.blogspot.com/2009/11/we-really-need-to-take-back-tech.html
 The Laid Back Show: http://laidbackshow.com/
 Awab Alvi: http://teeth.com.pk/blog/
 Ending Violence Against Women 2009: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/ending-violence-against-women-2009/